Ama-Proteas women azimisele ngokubuya
Ama-Momentum Proteas azimisele ngokuqeda i-One-Day International series bedlala ne-India kahle uma behlangana e-Senwes Park e-Potchefstroom kusasa.
Iqembu lezwe labesifazane lingemuva ngo-2-0 kwimidlalo emithathu emuva kokuhlulwa kanzima ngama-runs angu-88 nangu-178 izivakashi e-Kimberly, kodwa umqeqeshi u-Hilton Moreeng uthi iqembu lakhe lizimisele ngokuguqula inhlanhla yabo. Uyazi ukuthi iqembu lakhe lihluliwe iqembu lase-India elisebenze kangcono kunabo, kodwa uyathemba ukuthi bazodlala kangcono ngoMgqibelo.
“Uma ubheka yonke imiphumela, iqembu liphoxekile ngendlela elidlalengayo kanye nendlela esisebenze ngayo,” esho eqhubeka. “Mningi umsebenzi okumele wenziwe. Ekugcineni kosuku kuzomele sincome esidlala nabo ngoba badlale kangcono. Bakwenzile okujwayelekile kangcono kunathi, njengoba kusho imiphumela.”
“Okwethu manje, ukuqalela phansi futhi silungise okukodwa noma okubili ukuba nesiqiniseko sokuthi siwulungele umdlalo olandelayo. Siyaziqhenya ngendlela esidlala ngayo futhi sizwa sengathi siliphoxile izwe lethu, hayi thina kuphela.”
Le-series iyingxenye ye-ICC Women’s Championship (IWC), umqhudelwano wokungena kwi-2021 ICC Women’s World Cup ezobe ise-New Zealand. i-India isiwatholile amaphuzu amane kwi-series okwamanje kodwa i-South Africa izobheka ukutakula umqhudelwano ukuthola noma amabili.
“Kuzomele senze lokhu okujwayelekile (kusasa), ukuzithemba kungcono kwikhempu manje emuva kwezinxoxo esibenazo,” esho eqhubeka u-Moreeng. “Siyazi ukuthi leliqembu lenamathalente amaningi futhi bayakwazi ukuhlula leliqembu (i-India), kodwa kuzothatha umsebenzi onzima.”
“Abalulekile amaphuzu amabili angatholakala uma kuyela phambili. Sifuna ukuyiqeda kahle i-series futhi sibe nesiqiniseko sokuthi sibanawo amaphuzu etafuleni kuyela kwi-tour elandelayo esizoyidlala.”
Umqeqeshi uyajabula ngokubuyela enkundleni ebadlalisa kahle e-Potchefstroom, ukholwa ukuthi ukushintsha indawo kuzoba ikhona okudingekayo ukususa ulwembu kuyoze kuyovalwa.
“Akukubi ukushintsha indawo,” esho evala. “Siyakuthanda ukuza e-Potch (e-Potchefstroom), banezindawo ezinhle futhi sisijwayele kakhulu isimo. Iningi labadlali bethu bayidlalela lapha imidlalo yabo yokuqala ngakho kunokubaluleka kubona. Okusisalele thina ukusebenzisa ulwazi lwethu kanye nokujwayela.”
Umdlalo uzoqala ngo-10:00 (SAST).
Mandhana no-Yadav banqobela i-India women i-ODI series u-Mandhana, u-Goswami no-Pandey babeka i-India ngaphambili ngo-1-0 bedlala ne-Proteas women u-Van Niekerk ulindele ukudlala ekhaya i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas Women’s ODI ne-T20 bedlalela ekhaya ne-India i-CSA ihalalisela u-Van Niekerk no-Khuzwayo ngokuthola ama-SRSA Awards Ama-Proteas esifazane akhela kuhambo lwabo lwendebe yomhlaba AmaProteas esifazane anezinombolo ezincomekayo i-CSA ihalalisela amaProteas amathathu ngokufakwa eqenjini le-ICC WWC AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando u-Luus ubheka okuhle ngaphambi kwe-semi-final yamaProteas esifazane Australia iqhubeka nokungahlulwa ibhekene ne-South Africa